विश्वको कहाँ हुन्छ सेल्फी खिच्नेहरुको बढी मृत्यु, भारत पहिलो स्थानमा किन ? | Rajmarga
विश्वको कहाँ हुन्छ सेल्फी खिच्नेहरुको बढी मृत्यु, भारत पहिलो स्थानमा किन ?
मोबाइलबाट सेल्फी लिने क्रममा मृत्यु हुने घटना पछिल्लो समय निकै बढेको छ। केही दिनपहिला भारतको आन्ध्र प्रदेशको वारंगलमा एक जना जिम प्रशिक्षकले आउँदै गरेको रेलका साथ सेल्फी लिने क्रममा रेलले ठक्कर दिँदा मारिए ।
यसको २१ सेकेण्डको भिडियो फेसबुकमा हजारौपटक शेयर गरियो । जसमा २५ वर्षीय टी शिवा रेलको लिक नजिकै उभिएका छन् र पछाडिबाट रेल आउँदै गरेको देखाइएको छ। उनी नजिकै रहेको व्यक्तिले दिएको पटकपटकको चेतावनी र रेलको साइरन स्पष्टसँग सुनिन्छ । शिवा त्यहाँबाट हट्दैनन् र भिडियो बनाउरहन्छन् र उनी भन्छन्–वन मिनेट ।
दायाँतर्फबाट आएको रेल उनको टाउकोमा ठोक्किन्छ, त्यसलगत्तै फोन भूँइमा झर्छ । दक्षिण रेल्वेका प्रहरी अधिक्षक अशोक कुमारले बीबीसी न्युज तेलगुसँग कुरा गर्दै शिवा यसको माध्यमबाट सनसनी फैलाउन चाहन्थे र उनी स्ववयम ‘वीरता’ प्रदर्शन गर्न चाहेको बताए ।
अशोक कुमारले युवाहरुलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन् कि कसैले पनि जिन्दगी दाउमा लगाएर यस्तो हरकत नगरुन् ।
पिटर्सबर्गका कार्नेज मेलन विश्वविद्यालयमा पीएचडीका छात्र हेमंक लांबा र उनका साथीहरुको टिमले २०१४ देखि २०१६ का क्रममा सेल्फीसँग सम्बन्धित मृत्युको अध्ययन गरेका थिए । उनको अध्ययनका अनुसार तिब्र गतिबाट आउने रेलका अगाडि मानिसहरु भिडियो बनाउनेमा भारत घातक प्रवृत्ति बनेको छ।
अक्टोबर २०१७ मा रेल्वे ट्रैकमा सेल्फी लिँदै गर्दा कर्नाटकमा तीन र दिल्द्यलीमा दुई किशोरको मृत्यु भएको थियो । अक्टोबर २०१७ मै ओडिशाको रायगढ जिल्लामा सेल्फी लिने क्रममा आन्द्र प्रदेशका २७ र २३ वर्षीय दुई युवती नदीमा डुबेका थिए ।
जुलाई २०१७ मा आन्ध्र प्रदेशकै विशाखापट्टनम जिल्लाको बोर्रा केभ्स जक्शनमा कुदिरहेको रेलको अगाडि सेल्फी लिएका कारण एक जना फार्मेशीका छात्रको मृत्यु भएको थियो । आन्ध्र प्रदेशमै ट्रेनको डिब्बामा चढेर सेल्फी दिने क्रममा हाई भोल्टेज वायरले छुँदा एक जना इन्जिनियरिङका छात्रको मृत्यु भएको थिाये । कार्नेजका शोधकर्ता छात्र र दिल्लीको इन्द्रप्रस्थ इन्ष्टिच्युट अफ इन्फरमेशनले संसारका १२७ सेल्फीका क्रममा मृत्युको अध्ययन गर्दा यसमध्ये ७६ मृत्यु मात्र भारतमा भएको पाइएको थियो । जुन पूरा संसारकै सबै भन्दा बढी तथ्यांक हो ।
कसरी रोकिएला यो सिलसिला
सेल्फीका कारण हुने मृत्युको बढ्दो तथ्यांकका कारण मुम्बई प्रहरीले विभिन्न १५ स्थानलाई सूचीकृत गरेको छ जहाँ सेल्फी लिन ‘खतरनाक हुन सक्दछ’।
दक्षिणमध्ये रेल्वेका प्रवक्ता शकील अहमदले बीबीसी न्युज तेलगुलाई बताएअनुसार यो कुरा ध्यान दिन आवश्यक छ कि रेल्वे एक्ट, १९८९ को धारा १४५ र १४७ अन्तर्गत रेल्वे ट्रैकमा चढेर वा वरपर उभिएर सेल्फी वा फोटो लिनु अपराध हो ।
सन् २०१७ मा सामसुङ कम्पनीले एउटा भिडियो जारी गरेको थियो, जसमा मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुसँग आग्रह गरिएको थियो कि सेल्फी लिने बेला सावधान रहुन् । यहाँसम्म कि भारतको केन्द्रिय परिवहन मन्त्री नितिन गडकरी पनि यो अभियानका सदस्य थिए ।
सेल्फीका कारण हुने दुर्घटनामा शोध गर्ने समूहले एउटा मोबाइल ऐप पनि सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा संसारभरका खतरनाक स्थानको सूची दिइएको छ। विजयवाडाको सिद्धार्थ इन्जिनियरिङ कलेजका प्राध्यापक र दुई छोराकी आमा प्रसुना बलंतरापु वर्तमान पुस्तालाई ‘सेल्फीवाला पुस्ता’ बताउँदै भन्छिन कि सेल्फी जिन्दगीको हिस्सा बनेको छ र युवाहरुबीच यो ट्रेन्डलाई कसैले रोक्न सक्दैन, यहाँसम्म कि पाकाहरु पनि धेरै सेल्फी लिन्छन्।
अतितमा भएका मृत्युहरुको जिकिर गर्दै उनी भन्छिन् कि युवाहरु सेल्फी मोह कसरी त्याग्न सक्छन् जब यो संस्कृतिलाई देशका प्रधानमन्त्रीदेखि चलचित्र स्टारसम्म बढावा दिइरहेका छन् । उनी भन्छिन्–समाज भावनात्मक गरिबीबाट पीडित छ । पूरा समाज एकप्रकारको किशोरावस्थामा छ, जसले राम्रो र नराम्रोबीच भेद गर्न सकिरहेको छैन ।
भारतकै हैदरावादका एक जना मनोचिकित्सक सी वीरेन्दरका अनुसार धेरै युवा यस्तो सेल्फी लिन्छन् जस्तो कि उनीहरु अटेन्सन डेफिसिट हाइपर एक्टिभ डिसअर्डर (एडीएचडी) बाट पीडित छन् । वीरेन्दरका अनुसार उनीसँग दुई जना किशोरीले सम्पर्क गरेका थिए कि उनीहरु कुनै पनि विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दैनन् । उनले पाए कि पढाईमा खराब प्रदर्शनको पछाडि सेल्फी मोह पनि थियो ।
अबुधावीका हड्डी रोग चिकित्सक डाक्टर किरण कुमार भन्छन् कि सेल्फीका कारण भइरहेको मृत्यु रोक्नका लागि प्रविधिभन्दा बाहिरको जीवनलाई महत्व दिनु आवश्यक छ। उनले फोनमा भने कि अहिले वास्तविक जीवनमा जुन भावनात्मक समर्थन प्राप्त भइरहेको छैन, उनीहरु त्यो सामाजिक संजालमा खोज्ने कोशिस गरिरहेका छन् । बीबीसी हिन्दी
Previous post: आईपीएलमा आज सन्दिपको अन्तिम खेल, कस्तो रहला प्रदर्शन ?
Next post: थाहा पाइराख्नुस् महिलाको पुष्ट वक्षस्थलप्रति यसकारण पुरुष आकर्षित हुन्छन्